I-Ahrefs yethula Ithuluzi Lokucwaninga Kwamasayithi Elimangalisayo | Martech Zone
Lwesibili, Disemba 19, 2017 NgoLwesithathu, uDisemba 20, 2017 Douglas Karr
Njengomeluleki we-SEO osebenzayo, ngivivinye futhi ngasebenzisa cishe wonke amapulatifomu emakethe. Ngokwethembeka konke, bengilahlekelwa yithemba ebuningini bamapulatifomu ayizidudla empeleni nje ebeyinqwaba yabahloli abashayisane bahlangana babe ithuluzi elilodwa abathengisi abathanda ukulibiza ngokuthi yi-SEO audit.
Amaklayenti ayevame ukuzama eyodwa bese kuthi okwesibili aqagele umsebenzi omkhulu esasiwenza ukubuyisela isayithi labo empilweni - benganaki ukuthi ithuluzi abalisebenzisayo lalisuselwe kuzinto ezanyamalala eminyakeni eyishumi edlule. Ngokwami, ngisebenzisa inhlanganisela yamathuluzi aku-inthanethi, ama-analytics, abahloli be-snippet abacebile, ama-webmasters, izivivinyo zejubane, abakhasi abangaxhunyiwe ku-inthanethi, ukulandelwa kohambo olwenziwayo, nokumba kumathempulethi esayithi ukulungisa izingqinamba.
Njalo ngonyaka, umthelela wezinkinga ezihambisana nama-algorithms osesho lwe-organic uyaqhubeka nokushintsha - kepha ngasizathu simbe, lawo mathuluzi wokucwaninga akuvamile ukuthi enze. Futhi, ngokuhamba kwesikhathi, ngingasho ukuthi ochwepheshe be-SEO empeleni bebefuna i- ithuluzi lezempilo lesiza esikhundleni sokucwaninga okuthile okuzithobile, okuphelelwe yisikhathi kwe-SEO. Ukucwaningwa kwamabhuku okunikela ngamathuluzi amaningi ukuze ochwepheshe bakwazi ukugxila ezindaweni abakhathazeke ngazo.
Lelo thuluzi manje selikhona nge-Ahrefs 'new Ukuhlolwa Kwamasayithi ithuluzi.
Izinjini zokucinga zisebenzisa izinto ezingaphezu kwezingama-200 ezahlukahlukene ukufinyelela iwebhusayithi yakho bese zinquma ukuthi kufanele yini ukubekwa phezulu emiphumeleni yokucinga. Njengoba kunezinto eziningi okufanele uzicabangele, amawebhusayithi amaningi athanda ukunganaki inani elikhulu lezinkinga zobuchwepheshe be-SEO kanye nemikhuba eminingi yokwenza okuhle ebenza babe kude nokuthola ithrafikhi ekusesheni.
The new Ithuluzi Lokuhlola Indawo Lama-Ahrefs izokhasa iwebhusayithi yakho yonke futhi ikhiqize imibiko ehlukahlukene ezokusiza ukuthi uhlaziye impilo yewebhusayithi yakho futhi ulungise zonke izingqinamba ezikhona esizeni. Manje usungagxila kulokho okubona njengezici ezibucayi zesayithi kunokuba nohlelo olukutshela nje.
Ithuluzi le-Ahrefs 'Site Audit lilodwa ebhokisini labo lamathuluzi - okubandakanya amathuluzi wokuhlaziya okuncintisanayo, ucwaningo lwamagama asemqoka, ucwaningo lwe-backlink, ucwaningo lokuqukethwe, ukulandelwa kwezinga, nokuqapha iwebhu
Tags: ahrefsithuluzi lokuhlolaucwaningo lwe-backlinkUkuhlaziywa kokuncintisanaucwaningo lokuqukethweucwaningo lwegama elingukhiyeukulandelela isikhundlaithuluzi le-seoama-seo amathuluziukuhlolwa kwamasayithiUmcwaningi mabhuku weSayithiimpilo yesayithiukuqapha iwebhu